Tani Wadaninimo Ka Weyn! [ MAQAAL] | SAHAN ONLINE
Tani Wadaninimo Ka Weyn! [ MAQAAL]
“Maanta ayaad fursad haysataa dalkaaguna wuu kuu baahan yahay ee maxaad u hibbayn dalkaaga” waa halkudhig ka mid ah halkudhigyo iyo khudbado lagu soo bandhigay kulan loogu wanqalay fursadaha muwaadinka Soomaaliyeed kaasi oo ka dhacay magaaladda Boosaaso Taariikhdu markay ahayd 2dii Febraayo 2018,
Waxaa hadalka furtay Najmo Maxamuud Sh. Cumar oo loo yaqaan Qaran Bila,waxay si niyad ah u soo dhawaysay ka qaybgalayaashii kullanka oo ka koobnaa dhalinyaro da’yar oo wiilal iyo gabdho ah, Macalimiin Jaamacadeed, aqooyahano iyo marti-sharaf kale oo ay ku jireen nabadoono.
Najmo waxay khudbadeeda oo qoraal ah ku taxtay 10 qodob oo ay sheegtay inay yihiin fursadaha uu haysto muwaadinka Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisa uu wax kaga bedeli karo.
Khibrad iyo nolosha.
Najmo waxay xustay in Fursada caafimaad iyo xoog ee ilaahay siiyay dhalinyarada ay uga faa’iidaysan karaan in dalkooda ku difaacaan, kuna dhisaan, danyarta iyo bulshada inta taagta daran ay ugu adeegaan. Aqoonta aan dal lagu badbaadin karin, bulshaduna aanay intifaacsan karin faa’ido ma laha ayay tiri. Masuuliyada ka saaran dalka iyo dadka qofka dhalinyarada ah ee aqoonta leh ayay sidoo ka hadashay, iyadoo ku boorisay in fikradaha loo bedelo ficil.
Waxay ku dheeraatay muhiimada ay leedahay in dhalinyaradu wax ka bartaan, khibradna ka korosadaan dadkooda waaweyn oo ayan la tartamin, hoggaaminta iyo kuraastana ku qabsan.
Tusaale waxay u soo qaadatay mar ay magaalada Muqdisho kula kulantay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxay sheegtay in ay indhaha siin kari wayday madaxweynaha haybada iyo sharafta uu ilaahay siiyay darteed . in la Sharfo, la Maamuuse,lana qadariye Madaxda ayay dhalinyarada ku boorisay.
Najmo oo sida codkornimada iyo aftahnimadu ku dheehantahay u soo jeedisay khudbadeeda ay aad ii soo jiidatay waxay gunaanadkii dhalinyarada ku boorisay in noqdaan kuwa Jeclaada, Amaana, Kuna faana dalkooda ciidiisa, calankiisa iyo bulshadiisaba.Barashada afka, dhaqanka, taariikhda dalka iyo diinta ayay dhalinyarada ku boorisay inay bartaan. Qabylaada, musuqmaasuqa iyo cadaal xumada ayaa sidoo kale kula dardaarantay inay necbaadaan.
Liibaan Axmed Shire oo ah aqoonyahan, madaxna ka ah hay’adda Cilmi-baarista iyo horumarinta geeska afrika, khudbad qiimo leh ayuu ka jeediyay kullanka. Wuxuu ka sheekeeyay xiligii Soomaalidu burburka gashay ragii iyo haweenkii dhexda u xirtay inay buuxiyaan kaalintii ay banaysay dowladdi dhexe. tusaale wuxuu u soo qaatay ragii asaasay dugsiyada iyo jaamacadaha maanta ka jira Soomaaliya, waxay aaminsanaayeen wadaniyada iyo masuuliyada saaran ayuu yiri. Doorka haweenka ee bulshada ayuu xusay, isagoo sheegay inay muwaadiniin yihiin hooyooyinka wadooyinka ku iibiya qaadka iyo badeecaha si ay u caruurtooda iyo ehelkooda u caawiyaan, iyagoo u adkaysanaya qoraxda iyo dabaysha.
Liibaan Axmed Shire, Agaasimaha Hay’ada Cilmu baarista Geeska afrika
Intii uu socday kullanku waxaa dareenka ka qaybgalayaasha soo jiitay gabar magaceeda la iigu sheegay Hinda oo aan u malaynayo in gobolka Sanaag ka timid. Hinda waxay sheegtay in dhalinyarada kale ka nasiib badan yihiin oo intii badnayd nolosheeda ayan arkin calanka Soomaaliyeed. taariikhda dalkeedana laga fogeeyay. Ilmo ayaa indhaheeda ka soo daadatay. qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii ayaa la ilmeeyay, lana qaybsaday dareenkooda.
Guddoomiye K/xigeenka Jaamacadda Bosaso, Macalimiin, Nabadoono iyo xubno ka socday dowladda Hoose ee Bosaso ayaa sidoo kale khudbad ka jeediyay kullanka. dhammaantood waxay ku booriyeen dhalinyarada in dalkooda ka shaqaystaan, oo aaminaan.Waxay ku dhiirigaliyeen in Ciidamada ay ka mid noqdaan iyo shaqaalaha dowladda. muwaadinka dhabta ahi waa midka aan ka faanin shaqooyinka dalka ka jira, oo aan u kala saarin mid hoosaysa iyo mid sare ayay yiraahdeen.
Muhiimada ay leedahay in dhalinyarada ay dhalinyarada kale ka wacyigaliyaan inay ka fogaadaan falalka keenaya amni xumada ayaa lagu soo qaaday khudbadaha, waxaana dhalinyarada lagu baraarujiyay inay la shaqeeyaan dowladooda iyo waxgaradkooda.
Baraaruga wadaninimo ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee curtay bilowgii sanadkii 2017dii. kooxaha Dhalinyarada ee ka kacay magaalooyinka Muqdisho, Galkacayo, Garoowe, Qardho, Carmo, Bosaso iyo magaalooyinka, magacyada kala duwana la baxay, wuxuu muujinayaa astaan yididiilo oo ah in dalku uu u socdo jiho wanaagsan.
Xooga iyo baraaruga dhalinyaradu wuxuu noqon karaa mid dalka iyo dadku ka faa’iidaystaan haddii lagu hago wado sax, istaraatijiyada loo dejiyo, taasi caksigeeda wuxuu noqon karaa dhibaato hore oo ku soo biirta Soomaaliya, ayna ka faa’iidaystaan kuwa danaha siyaasadeed ee guracan wata ama kooxo kale oo dano fog leh.
Waxaan ku soo gunaanadaya mid ka mid ah hal-ku-dhigyada ku qornaa boorka kullanka oo ahaa “ dad dhisan baa dal dhisa” ha la dhiso dhalinyarada si ay mustaqbalka dalka u dhisaan
W/Q: Cumar Siciid Maxamed